PSG Oo Hoos U Dhigtay Qiimaha Ay Ku Iibinayso Kylian Mbappe Oo Diiday Inuu Heshiis Cusub U Saxeexo - Laacib
HomeSuuqa Kala IibsigaPSG Oo Hoos U Dhigtay Qiimaha Ay Ku Iibinayso Kylian Mbappe Oo Diiday Inuu Heshiis Cusub U Saxeexo
PSG Oo Hoos U Dhigtay Qiimaha Ay Ku Iibinayso Kylian Mbappe Oo Diiday Inuu Heshiis Cusub U Saxeexo
Kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ayaa lagu soo warramayaa inay luminayso kalsoonidii ay ku qabtay weeraryahankeeda Kylian Mbappe oo dhamaadka heshiiskiisa ay ka hadhsan tahay xilli ciyaareedka dhowaanta bilaabmi doona oo kaliya, taas oo sababi karta in uu si bilaash ah kaga tago haddii aanay iibin xagaaga soo aaddan ama aanay ku qancinin inuu qandaraas cusub saxeexo.
Xiddiga reer France ayaa la sheegay in uu iska diidan yahay in uu heshiiska u kordhiyo kooxdiisa, si uu ugu cadaadiyo in ay iibiso. Maadaama uu waqtigu cararayo, PSG ayaa dedaal dheeraad ah ka samaynaysa sidii uu laacibkani heshiis cusub u saxeexi lahaa.
Mbappe oo qandaraaska hadda uu ku eg yahay June 2022, waxay gaadhay go’aan ah in ay qiimihiisa hoos u dhigto si ay kooxaha doonayaa awood ugu helaan in ay iibsan karaan xagaaga soo socda.
Sida uu qoray wargeyska Le Parisien, PSG waxa ka dhamaaday samirkii sugitaanka ahaa ee laacibkan, waxaanay hadda ku jirtaa xaalad degganaansho la’aan ah, iyadoo ciyaartoyguna uu dhowaan qiray in ay jiraan duruufo ku riixaya in uu iskaga tago horyaalka Faransiiska.
Wargeysku waxa uu sheegay in PSG ay qiimo dhimis ku samaynayso qiimaha ay ku iibinayso Kylian Mbappe, isla markaana kooxaha doonaya in ay la saxeexdaan ay kaliya bixin doonaan 120 milyan oo Gini, halkii markii hore lagu xidhayay 150 milyan oo Gini.
Qiimahan oo la mid ah kuwii ay Real Madrid iyo Barcelona kusoo iibsadeen xiddigahooda fashilmay ee Eden Hazard iyo Antoine Griezmann, ayaa u muuqda mid la awoodi karayo inkasta oo dhaqaalaha kooxaha uu dhaawac weyn gaadhsiiyey Korona Fayras.
Laacibkan oo warbaahinta la hadlay toddobaadkan markii uu xulkiisu 1-0 kaga badiyey Bosnia-Herzegovina, ayaa wax laga weydiiyey qandaraaskiisa sii dhamaanaya ee Parc des Princes, waxaanu sheegay in ay jirto dhalleecayn badan oo uu ku mutaysto in uu ka ciyaaro gudaha waddankiisa, taas oo loo fahmay in uu farriin dadban kooxdiisa ugu sheegayo in uu tegayo.